Guqula i-imeyile ye-Instagram - VidaBytes | LifeBytes
Amaxesha amaninzi senza iprofayile yenethiwekhi yoluntu nge-imeyile esiye siyeke ukuyisebenzisa kamva. Ingxaki kukuba, ukuba inethiwekhi yoluntu ine-imeyile kuphela, awuyi kufumana izaziso, kwaye ubuya kuba neengxaki zokunxibelelana nabo ukuba uyayifuna. Ngesi sizathu, siza kugxila kwinethiwekhi kwaye sikubuze: ngaba uyazi ukuba ungayitshintsha njani i-imeyile ye-Instagram?
Kusenokwenzeka ukuba ubunomdla kwaye uyazi apho ungayenza khona, kodwa mhlawumbi kunjalo ukuba awunalo nofifi lokuba uyenza njani. Ungakhathazeki, siza kukunceda ngoku.
1 Kutheni utshintshe i-imeyile ye-Instagram
2 Uyitshintsha njani i-imeyile ye-Instagram kwi-app
3 Guqula i-imeyile ye-Instagram kwikhompyuter
4 Guqula i-imeyile ye-Instagram ngaphandle kokungena kwiakhawunti
Kutheni utshintshe i-imeyile ye-Instagram
Kukho izizathu ezininzi zokuba ufune ukutshintsha i-imeyile yakho ye-Instagram.. Inokuba kungenxa yokuba i-akhawunti yakho ye-imeyile igqekeziwe, ngenxa yokuba uyilibele i-password yakho, kuba awuyisebenzisi ... Enyanisweni, inokuba nasiphi na isizathu esikwenza ukuba uyitshintshe kwiintanethi zentlalo, kungekhona nje kwi-intanethi. Instagram.
Ingxaki kukuba, ngaphaya kwexesha sabhalisa, abaninzi abazi ncam ukuba ngawaphi amanyathelo amakawathathe ukuyitshintsha. Kwaye le yinto esiza kuzama ukuyitshintsha.
Uyitshintsha njani i-imeyile ye-Instagram kwi-app
Njengokuba usazi, I-Instagram ngoku ikuvumela ukuba ungene kwisicelo seselula (yeyona ilula kwaye ikhawuleza kakhulu), okanye kwikhompyuter. Ekugqibeleni yonke into ilinganiselwe kakhulu, kodwa ndingakuvumela ukuba uyitshintshe. Ngoku, masihambe inyathelo ngenyathelo.
Nantsi ke imiyalelo ukuyitshintsha kwi-app. Kufuneka wenze ntoni?
Eyokuqala, vula i-Instagram kwiselula yakho. Nje ukuba uvule, yiya kwiprofayile yakho. Ndingene ngaphakathi, khangela i "Hlela iprofayile" ukhetho.
Ukuba ubeka ingqalelo, i-imeyile yakho iya kuvela kuLwazi lweProfayile. Ukuba ayiphumi, ngoko kuya kufuneka ufake iiKhetho zoQhagamshelwano kwaye kufuneka ibonakale apho.
Ukuba awufumani nantoni na, ngoko ucofe kwi Useto loLwazi loBuqu. I-imeyile obhalise ngayo i-akhawunti iya kuvela apho. Kwaye into esifuna ukuyenza kukutshintsha. Njani?
Cofa kwidilesi ye-imeyile. Oku kuya kukuvumela ukuba ucime i-imeyile obunayo kwaye ubeke entsha oyifunayo. Nje ukuba unayo, cofa i-bezel ephezulu ngasekunene ukuze wamkele utshintsho.
I-Instagram iya kukuthumelela i-imeyile kwi-imeyile yakho entsha ukuqinisekisa ukuba uyayifuna ngokwenene loo akhawunti ngoku, ngoko ke kuya kufuneka unikeze ikhonkco kuba, ukuba awuyingqinisi, awuyi kukwazi ukufikelela ngaloo imeyile.
Guqula i-imeyile ye-Instagram kwikhompyuter
Ukuba ungomnye wabo bakhetha ukwenza oku ngekhompyuter, yazi ukuba ungayenza. Kwaye kwakhona ngokulula kakhulu. Enyanisweni, kukulandela amanyathelo afanayo ebesiwabonisile ngaphambili, kodwa kule meko ukusuka kwikhompyuter. Oko kukuthi:
Ngenisa iakhawunti yakho ye-Instagram kwikhompyuter.
Yiya kwiprofayile yakho.
Betha hlela iprofayile.
Uluhlu lwedatha luya kuvela njengewebhusayithi, i-biography, isondo ... kunye ne-imeyile.
Cofa apho ikhoyo, cima kwaye wongeze entsha.
I-Instagram iya kukuthumelela i-imeyile yokuqinisekisa utshintsho kwaye xa uyenzile, yonke inkqubo iya kwenziwa.
Guqula i-imeyile ye-Instagram ngaphandle kokungena kwiakhawunti
Enye yamaqhinga anayo i-Instagram yinto enokwenzeka yokutshintsha i-imeyile ngaphandle kokuba ngaphakathi kweakhawunti. Oku kunokwenzeka, umzekelo, ngenxa yokuba uphulukene neselfowuni yakho, okanye ngenxa yokuba unezinye iiakhawunti kwaye awufuni okanye awukwazi ukuyisebenzisa leyo.
Ukuba kwenzeka kuwe, amanyathelo omele uwathathe qala ngokuvula i-Instagram app. Ukuba ujonga, xa ibuza ukufikelela kwidatha yakho, ikunika ufikelelo kuncedo, phantsi kweqhosha lasekhaya. Cofa apho.
Ngoku Iza kukubuza nokuba yeyakho i-imeyile, inombolo yefowuni, okanye igama lomsebenzisi. yeakhawunti ye-Instagram apho ufuna ukutshintsha i-imeyile kuyo.
Iya kukunika iinketho ezininzi: Fumana i-imeyile (kwi-akhawunti edibeneyo), umyalezo wombhalo (SMS), okanye uqale nge-Facebook. Kuxhomekeke kwinto oyikhethayo, iya kuba ngaphezulu okanye ngaphantsi ngokukhawuleza.
Uya kufikelela kwiscreen esitsha apho unokutshintsha khona igama lokugqitha kwaye, ngexesha elithile, iya kukubonisa i-imeyile enayo. Kulapho kufuneka ucime le onayo kwaye ubeke eyakho, kwaye ukuba inokuba yinombolo yakho yefowuni.
Nje ukuba uqinisekise yonke into uya kwenziwa.
Ngokwenyani, into oyenzayo kukuba i-Instagram icinga ukuba awuyikhumbuli igama eligqithisiweyo, yiyo loo nto uyenza le nkqubo, kodwa eneneni injongo yakho kukutshintsha i-imeyile ngaphandle kokungena kwiakhawunti. Kodwa inokuba licebo elilungileyo ukuba awukwazi ukufikelela kwiakhawunti yakho okwangoku kwaye kufuneka utshintshe imeyile ngokukhawuleza.
Ngoku ekubeni uyayazi indlela yokutshintsha i-imeyile ye-Instagram, xa uyifuna, uya kukwazi ukuba ngawaphi amanyathelo ekufuneka uwathathe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubomi beByte » Tutorials » Guqula i-imeyile ye-Instagram